musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Costa Rica Kupwanya Nhau » Wepamusoro mashanu ezororo nzvimbo dzegore ra5
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Costa Rica Kupwanya Nhau • Iceland Breaking News • Mexico Kuputsa Nhau • Portugal Kuvhuna Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Kana iwe uri mumwe we 11% yevaAmerican vachishandisa mutero muna 2018 pazororo uye unoda kumwe kurudziro yeako anotevera mafaro, saka pamwe iwe ungazoda kufunga dzimwe dzenzvimbo dzakanyorwa pazasi. Hazvina kumbonyanya kukurumidza kuronga yako inotevera inokodzera-kuzorora, kungave kuri kufara kutsvaga muCosta Rica kana kufamba-famba mumigwagwa ine nhoroondo muPortugal, tanga gore idzva nekuronga rako rinotevera rekuona kuona zvakanakisa zvinotyisa uye uine zvinoshamisa zviitiko.
Kwete chete kuti Mexico ine zvinokwezva zvinotyisa, mahombekombe akanaka, misha yeMayan uye inoshamisa magwenga emakungwa, zvakare iri nzvimbo iri nyore yekuenda kune bhajeti yakapihwa iyezvino mareti ekuchinjana. Kana mahombekombe emahombekombe kana sango adventures isiri yako chinhu, enda kuguta rinopisa-nzvimbo dzeMerida, Mexico City kana Oaxaca yetsika, nhoroondo uye imwe yekudya-yavo yekumwisa-cuisine.
Kubva pamazororo emhuri kumaruwa kusvika kumaguta ekuLondon, kunakidzwa nezororo pasina kunetseka inoitwa nyore nyore muUK. Kunyangwe iwe ukasarudza Cornwall kumadokero kana Lake Lake kuchamhembe, runako rwayo rwekumaruwa zvechokwadi runosiya runako rwekunakidza pauri. Guta-rakangwara, haisi London chete iri kukwezva vashanyi: Bristol, Leeds kana Manchester vese vakasimba pamepu senzvimbo dzakanaka dzekushanyira futi.
3. Kosita Rika
Iyi diki republic inogona kunge iri imwe yenzvimbo dzakasiyana-siyana pasi pano nerunako rwepanyama rwunotenderera kubva kumahombekombe kusvika kumasango anonaya, mangrove madutu kusvika kumakomo anoputika. Nzvimbo yepamusoro yekushanyira eco-mushanyi iwe uchave nerusununguko rwekukwira mumasango ekare emvura kana kusvetuka nzira dzemvura dzeTortuguero National Park uye uswedere pedyo nemhuka dzesango.
Yakagara pamusoro penzvimbo ine nzvimbo ine moto, Iceland iri kuratidza kuve nzvimbo inozivikanwa pakapihwa iyo zvinoshamisa zviratidzo zveMwenje yeNorth ayo anoonekwa zvakanyanya muna Kukadzi. Paunenge uripo, shanyira yakakurumbira Blue Lagoon, Seljalandsfoss mapopoma, Eyjafjallajökull volcano uye jecha dema kuVik beach. Kana iwe uchinge waongorora yavo yemashiripiti glacier uye watora kunyura mune imwe yakawanda hots matsime, ongorora yayo yepasi rose guta, Reykjavík.
Iyi inogona kunge iri nyika diki, inowanzo kufuratirwa ichida Spain kana Italy, asi kushanya kwePortugal parizvino kuri kuwedzera uye hakuratidze kupera kwekudzikira. Kunze kweguta rayo rine tsika dzakasiyana, Lisbon, yechipiri, kumusoro uye kuuya kuchamhembe kweguta, Porto iri kuwanawo mukurumbira wekunakidzwa. Kanda mune mamwe emahombekombe anoshamisa muAlgarve, medieval castle uye UNESCO World Heritage Sites yeTomar kana Batalha, uye chiitiko chikuru chakakumirira.